एक सफल रियल स्टेट ब्यापारी बन्ने ५ तरिका – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
एक सफल रियल स्टेट ब्यापारी बन्ने ५ तरिका
२०७४, १० माघ बुधबार २३:५१
रियल एस्टेट व्यापार विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायको बीचमा गणना गरिएको छ। सायद तपाईलाई थाहा छ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस व्यवसायको मास्टर पनि हो।
मित्रहरू, अचल सम्पत्ति व्यवसाय, अर्थात अचल संपत्ति वा भूमि, घर, पसल आदि, भारतमा छिटो बढ्दो व्यवसाय हो। र यही कारण आज यस व्यवसायमा अनगिनत अवसरहरू उपलब्ध छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र लाभकारी अवसर मध्ये एक को एक रियल एस्टेट सल्लाहकार वा सम्पत्ति व्यापारी हो।
सम्पत्ति बिक्रेता / रियल एस्टेट परामर्शदाता / रियल एस्टेट ब्रोकर / सम्पत्ति एजेन्ट को हो?
घरहरुमा व्यक्तिले छ कि सम्पत्ति बिक्रेता, एक मध्यस्थ स्टोर बिक्री, भूमि आदि वा भाडामा मा लिन रूपमा सेवा गरे। तरिकामा यो सम्पत्ति मालिक र खरीदार वा मोहि र दुई दल बीच यसको समग्र सम्झौता अन्तिम बीच पुल छ। यो काम बरु केही हजार देखि सय धेरै हजार रुपैया सम्म हुन सक्छ जो आज्ञा वा दलाली प्राप्त गर्दछ।
एक रियल एस्टेट सम्पत्ति एजेन्सी कत्तिको ब्रोकरेज कमाउन सक्छ?
सामान्यतया, रिमुभर भाडामा मा विशेषता एजेन्ट, महिनाको आधा, एक आयोग रूपमा भाडामा को2महिना लाग्न सक्छ। उसले मालिकको मालिक र किरायेदारबाट पनि दुवै पक्षबाट आयोग लिन्छ। र सेल एकाइहरूको सम्पत्ति रूपमा सम्पत्ति आधा द्वारा कमीशन गर्न सकिन्छ 2%। धेरै अचल सम्पत्ति एजेन्टहरूले यो कामबाट हरेक महिना लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन्।
एक अचल सम्पत्ति एजेन्ट / सम्पत्ति डीलरले के गर्छ?
सम्पत्ति को रखरखाव – जस्तै पेंट, मरम्मत, आदि।
जब सम्झौता अन्तिम हो भाडामा सम्झौता गर्नुहोस्
रजिस्ट्री अफिसमा भूमिको बिक्रीमा भूमि दर्ता गरिँदै
स्टोरको बिक्रीमा सम्बन्धित कागजात तयारी गर्नुहोस्।
घर खाली छ भनेर जाँच्नुहोस्
घर सही स्थितिमा छ
बिजुली बिल जम्मा गरिन्छ
हाउस कर जमा गरिएको छ
नोट: तपाइँले यहाँ उल्लिखित सबै परिस्थितिहरूमा के गर्नु पर्छ सबै आवश्यक छैन। के गर्नु पर्ने छ भने मामलामा मामला देखि फरक छ।
सम्बन्धित: एक रेस्त्राँ कसरी सुरु गर्ने?
एक सम्पत्ति व्यापारी वा सल्लाहकार एक नौकरी हो जसमा तपाईं कुनै पनि लागतमा अचल सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुनेछ। यस कार्यमा सफलताको लागि, निम्न ५ महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पढ्नुहोस्:
एक सफल रियल एस्टेट सम्पत्ति बिक्रेता बनने को लागि ५ युक्तिहरु
1) अध्ययन भन्दा बढी सिक्ने फोकस गर्नुहोस्:
यो व्यापार सुरु गर्न धेरै टेक्निकल शिक्षाको आवश्यकता छैन। केहि निजी संस्थाहरूले यस्ता पाठ्यक्रमहरू गर्छन् तर यो व्यवसायले तपाई भन्दा भन्दा अनुभवबाट बढी सिक्न सक्छ।6महिनादेखि 1 वर्षको अनुभव यो कारोबार सुरु गर्ने अधिकार हो।
तपाईंले अनुभव गरिरहँदा यी चीजहरू सिक्नुहोस्
कुन सम्पत्तिले तपाईलाई भेट्टाउन सक्छ
ग्राहकहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्
कानूनी कागजात के हो?
काम कसरी गर्ने
फ्लैट, जमीन आदि संग सम्बन्धित गणितीय गणना
2) नरम कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र विश्वसनीयता बनाए राख्नुहोस्:
विशेषता बिक्रेता, तपाईँ पनि नियमित रूपमा घर धनी वा भूमि मालिकसँग आफ्नो ग्राहकहरु सामना गर्नुपर्छ। यस तरिकामा तपाईंको सञ्चार कौशल राम्रो हुनुपर्छ। तपाईं चिन्तित पक्षबाट केवल भद्रताका साथ कुरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ, तर तपाईं प्रत्येक गतिविधि सबैभन्दा महत्त्व कारक भरोसा दिनुपर्छ।
लागि धेरै सम्पत्ति मालिक आफूलाई सम्पत्ति र आफ्नो परिसर प्रमुख अचल सम्पत्ति एजेन्ट देखाउन यो व्यवसाय अवस्थित छैन। त्यसैले यदि तपाईं ट्रस्ट कारकमा फिट हुनुहुन्न भने, केहि व्यक्तिले तपाईसंग सम्झौता गर्नेछ। सिर्जना सजिलो तरिका भरोसा गर्न – एक कार्यालय काम खोल्ने, पारदर्शिता र उहाँलाई भेट्न प्रतिबद्धता तपाईंको राख्नुहोस्।
सम्बन्धित: राम्रो संचार सञ्चारको ५ सिद्धान्तहरू विकास गर्दै
3) एउटा सम्पत्ति खोज्न यी विधिहरू पछ्याउनुहोस्:
तपाईं मोबाईल गर्न two- छ के गर्न चाहनुहुन्छ र जानकारी भर घुमफिर क्षेत्र धेरै राम्रो पहिलो राउन्ड हात हुनुपर्छ सबै तपाईं व्यापार को पहिलो जो भाडामा र बिक्री को लागि गुण को सम्पूर्ण क्षेत्र यो एक सूची बनाउनु पर्छ।
गुण खोज्ने माध्यम
हरेक दिन तपाईं दैनिक समाचार पत्रबाट राम्रो गुण जानकारी पाउनुहुन्छ
इन्टरनेटमा जादू ईटाहरु, ९९ एकड, Quikr, Comnflor र यस्तो May सम्पत्ति एक वेबसाइट को धेरै राम्रो जानकारी पनि समूह फेसबुक समूह पेजबाट हटाउन सकिन्छ सामाजिक अनुप्रयोगमा के अनुप्रयोग समूहको के हो?
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिचान भनेको तपाईंको सम्पर्क मार्फत सम्पत्ति पत्ता लगाउनु हो।
एकपटक तपाईंले गुणस्तरको डेटाबेस तयार गर्नुभएको बेला, तपाईं अब तिनीहरूका लागि सही ग्राहक पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
4) ग्राहकहरू फेला पार्नुहोस्:
तपाईंलाई व्यापार गर्न ग्राहकहरूलाई चाहिन्छ। यो ग्राहकले यी माध्यमहरूमा तपाईलाई भेट्न सक्दछ:
कार्यालय खोल्दै- कार्यालय सही ठाँउमा हुनु पर्छ जहाँ ग्राहकले तपाइँलाई सजिलै संग सम्पर्क गर्न सक्दछ
अखबार – अखबारमा साना विज्ञापनहरू प्रस्तुत गरेर
इन्टरनेट – जादू ब्रेक्स – 99 एकड – द्रुत-सामान्य फ्लोर एक वेबसाइट हो जुन रियल एस्टेट विज्ञापित गर्दछ; तपाईं यी वेबसाइटहरूको प्याकेजको विज्ञापनमार्फत पनि ग्राहकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं यसलाई Google, फेसबुक र यति मार्फत प्रचार गर्न वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ
र केवल रियल एस्टेटको लागि डायल ग्राहकलाई सम्पर्क गर्ने एक राम्रो तरिका हो।
एकपटक ग्राहक सम्पर्क गरिसके पछि, तपाइँ उसलाई उनीहरूको सम्पत्तिको लायक देखाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्। वास्तवमा, यो क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ र
5) काम कसरी गर्ने र लाभ कमाउन कसरी गुण सामान्यतया ४ कोटिहरू हुन्छन्
आवासीय – ई.ए. अपार्टमेन्ट फ्लैट, बंगला, पङ्क्ति हाउस, घर जसमा मान्छे बस्ने
व्यवसायिक – व्यापार, शोरूम, आदि को लागी पसल
औद्योगिक – कारखाना वा निर्माण एकाइ स्थापित गर्न ठाउँ
एक सल्लाहकारको रूपमा, तपाइँ यी गुणहरू भाडामा लिनुहुन्छ वा तिनीहरूलाई बेच्नुहुन्छ।
तपाईं भाडामा आधारित एक ब्रोकरेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि, तपाईंले पहिला ग्राहकलाई उपलब्ध गुणहरू देखाउनु पर्छ। मानिसहरू काम गरिरहेका दिनमा बीजी छन्, अधिकतर मानिसहरू रविवार वा छुट्टीको दिनको सम्पत्ति हेर्न चाहन्छन। एक एजेन्टको रूपमा तपाईलाई कुनै पनि समयमा ग्राहकहरूलाई मनोरञ्जन गर्न तयार हुनुपर्छ। एकपटक स्थापना भएपछि, तपाईं केही कर्मचारीहरू तिनीहरूको साथमा गर्न को लागी भाडा लिन सक्नुहुन्छ।
धेरै पटक मालिकको ग्राहक र ग्राहकको लागत पूरा छैन, र यसको कारणले गर्दा, धेरै सम्झौताहरू सामर्थ्य गर्दैनन्। यो तपाईंको काम छ मालिक र ग्राहकलाई एक मूल्य प्राप्त गर्न यदि तपाईं सफल भएमा, तपाईं ब्रोकरेज पाउनुहुन्छ। यो ब्रेकरेज एक 1 देखि2महिना किराया छ वा कुरा हो जो एक हो।
सम्पत्ति बिक्री कर ई.ए. बिक्री सौदा को ब्रोकरेज हुन सक्छ। यो ब्रेकरेज सम्पत्ति मूल्यको 1 देखि 1 प्रतिशत हो।
उदाहरणका लागि: यदि तपाई 25 लाख रुपैयाँको फ्ल्याट बेच्नुहुन्छ भने, तपाईले 50,000 दलालहरू 2% ले प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तर मित्रहरू, यो सजिलो छैन। कुनै पनि सम्झौता यति सजिलै फाइनलिएको छैन। अक्सर, पक्षहरू मूल्यमा सहमत हुँदैनन्, कहिलेकाहीं कुनै ऋण पास छैन भने। तर यदि सबै अवरोधहरूको क्रस ठोस हुन्छ, तब तिम्रो चाँदी चाँदी हो। ?
मित्रहरू, धैर्य र कडा काम अचल सम्पत्तिको काममा आवश्यक छ। धेरै मानिसहरू केही दिनको लागि यो काम गर्ने प्रयास गर्छन्। तर तिनीहरू सफलतामा सफलता प्राप्त गर्दैनन्, तिनीहरू निराश हुन्छन् र काम छोड्छन्। त्यस्तो समयमा धैर्य रहनुहोस् र कडा र ईमानदारीपूर्वक काम गरिरहनुहोस्, तपाईले पक्कै सफलता पाउनुहुनेछ!